मृ’त्यु हुनु अगावै विश्व प्रसिद्ध लेखक किर्जिदाले लेखेको नो’टले संसारलाई दुःखी तुल्यायो,पूरा पढ्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मृ’त्यु हुनु अगावै विश्व प्रसिद्ध लेखक किर्जिदाले लेखेको नो’टले संसारलाई दुःखी तुल्यायो,पूरा पढ्नुहोस।
एजेन्सी:विश्व प्रसिद्ध फ़ेशन डिजाइनर, ब्लगर एवम् लेखक किर्जिदा रोड्रिग्जद्वारा क्यान्सरबाट निधन हुनु अगाडि लेखिएको नोट यस्तो छ ।
१, दुनियाँको सबैभन्दा महंगो ब्राण्डको कारहरू मेरो ग्यारेजमा त्यसै थन्किएका छन् तर मलाई भने ह्विलचेयरको प्रयोग गरिरहनु परेको छ।…२, मेरो घरमा हरेकौ डिजाइनका कपडा, जुत्ता, महंगा सरसामानले भरिएको छ तर मेरो शरीर भने अस्पतालले दिएको एउटा छोटो पछ्यौरीले मात्र ढाकिएको छ।…
३, बैंकमा मेरो खाताहरूमा रहेको पैसा मेरो पैसा हुन्। तर अब त्यो पैसा मेरो कुनै कामको छैन।…४, मेरो घर एक महल झैं छ तर म अस्पतालमा एक सानो आकारको बिस्तरामा पल्टिरहेको छु।…
५, म एक फाइव स्टार होटलबाट अर्को फाइव स्टार होटलहरूमा जाने गर्थे। तर अब म आफ्नो समय अस्पतालमा एक प्रयोगशालाबाट दोस्रो प्रयोगशालामा जानका लागि बिताइरहेको छुँ।….६, मैले सयौं मानिसहरूलाई अटोग्राफ दिएकी छु तर आज डाक्टरहरूको प्रेस्क्रिप्शन नै मेरो लागि अटोग्राफ भएको छ।…
७, मेरो कपाललाई सजाउनको लागि मसंग सातजना ब्यूटीशियनहरू थिए तर आज मेरो टाउकोमा एउटा पनि कपाल छैन।…८, म एक निजी जेटमा जहाँ चाहे त्यहाँ उड्न सक्थे तर अब मलाई अस्पतालको बराण्डामा जानको लागि पनि दुईजना मानिसहरू सहयोग लिनु पर्छ।…
९, बिश्वमा कयौं प्रकारका खाद्यान्नहरूमा मेरो पहुँच छ तर अहिले मेरो आहार दिनमा दुई गोली र रातमा दुई थोपा तितो औषधि मात्र रहेको छ ।….
यो घर, यो कार, यो जेट, यो फर्नीचर, यति धेरै बैंक खाताहरू, यति धेरै प्रतिष्ठा र प्रसिद्धि, यीनीहरूको अब मेरो लागि कुनै काम छैन। यी मध्ये कसैले पनि मलाई थोरै भए पनि आराम दिन सक्दैनन्। यिनीहरूले केवल दिन सक्छन् त केही प्यारा मानिसहरूको अनुहार र उनीहरूको स्पर्श ।।
साथिहरु मृत्यु भन्दा अधिक सत्य केही पनि छैन, अनि किन गर्छन् मान्छेहरू सम्पत्तिको घमण्ड ? 😭
Previous आठ कक्षामा पढ्ने १३ वर्षीय विद्यार्थीका साथ भागीन २६ वर्षीया शिक्षिका,यो कस्तो अ’चम्म?,हेर्नुहोस।
Next इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै कोरिया : के-के हुँदैछ संशोधन ?हेर्नुहोस।